May 10, 2020 8290
नायक पल शाहले अहिले फिल्मको भविष्यका बारेमा सोचिहाल्ने अवस्था नआएको बताएका छन् । अहिलेको समय लक’डाउन कसरी सामना गर्ने, कोरोनालाई कसरी जित्ने भन्ने कुरा नै प्राथमिक भए’को बताएका छन् ।
उनले लकडाउ’न पछि मात्र फिल्मलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका छन् । लामो समय देखि जारी लकडा’उनका कारण अप्ठेरोमा परेका फिल्म प्राविधिकहरुला’ई सहयोग गर्न जुटेका उनले अहिले लकडाउनलाई नै प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेका छन् ।
उनले आफु पनि प्राविधिकवाट नै माथि आएका कारण उनीहरुको समस्याको बारेमा राम्रो जानकारी भएको उनले बताएका छन् । अभाववाट अहिलेको अवस्था सम्म आ”एका पलले आफुसंग धेरै भएर सहयोग गरेको भन्दा पनि अप्ठेरो परेको बेलामा सह’यात्री हुन सहयो’ग दिएको बताए ।
उनले फिल्म क्षेत्रमा सफल हुन जिवनमा गरेका सं’घर्षले नै अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न प्रेरणा दिने बताए । पछि’ल्लो समय नायक पलको साथमा उनको वहि’नी वहिनी रोशनी राज्यल’क्ष्मी शाह पनि हुन्छिन् । उनले पलको राहत वितरण अभियानमा सहयोग गर्दै आएकी छन् ।
लकडाउन घोषणा भएसंगै पलले प्राविधिकहरुलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले फिल्म प्राविधिक’हरुलाई ५ लाख रुपैया वरावरको राहत दिने घोषणा सामाजिक सञ्जा’ल मार्फत गरे । उनी नै पहिलो कलाकार थिए जसले फिल्म कलाकारहरुलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे । उनको सो कामको निकै प्रशंसा भयो । ‘
उनले आफुले गरेको सहयोगको घो’षणा अरुका लागि प्रेरक होस् भनेर गरेको बताए । त्यसप’छि नायीका पुजा शर्माले पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । उनले २ लाख रुपैया बराब’रको सहयोग वितरण पनि गरिसकिन् ।
रोशनीले आफ्नो अफि’सियल युट्युव च्यान’ल संचालन गरेकी छन् । जसमा पल र उनका परिवारका कृयाकलापका भिडियो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । ति भिडियो निकै धेरै दर्शक’ले मन पराएका छन् ।
पलले आफुले गरेको सहयो’गको घोषणा पछि आफ्नो परिवार निकै खुसी भएको बताए । बुवाले त म खाना नखाएपनि सन्तुष्ट छु भन्नुभयो, त्यती बेलाको वुवाको प्रतिकृया सम्झ’दै रोशनीले भनिन्, बुवा ममी निकै खुसी हुनुभएको छ ।
प्राविधिक संघ’का कलाकार पुष्कर लामाको सहयो_गमा पलले घर घरमा पुगेर सहयो’ग स्वरुप राहत वितरण गरेका थिए । उनले सहयोगको दायरा बढाएर फिल्ममा नायक नायीका’को पछाडी डान्स गर्नेह’रु र अन्य प्राविधिकलाई पनि सहयोग गरेको बताए ।
उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने गर्भवती र विरामी महिलाह’रुलाई पनि उनले सहयोग गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियोमा….
Prevभोलि वैशाख २९ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextभारतीय नायिका अनुष्काले बोकेको यो ब्यागमा मूल्य थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ ! हेर्नुहोस् मूल्य सहित
फेसबुकमा आज बाट थपियो यस्तो नयाँ सुविधा